June 27, 2021 - Channel Lover
လူကြားလို့မှ ကောင်းကြသေးရဲ့လားဗျာ… ရေမွန်မိသားစုဆီကနေ ဟော့ပေါ့ဖိုး သုံးသိန်းပြန်တောင်းသတဲ့😱😱😱
June 27, 2021 by Channel Lover
ရေမွန်မိဘတွေကို HopPot ဖိုး ၃ သိန်းပြန်တောင်းတဲ့ ရေမွန်ကောင်မလေး😱😱😱 ထူးဆန်းလိုက်တာဗျာ…. ဒီသတင်းကြားရတော့ ဟုတ်မှ ဟုတ်ပမလားလို့ အပုတ်ချချင်လို့ လျှောက်ပြောနေကြတယ်ထင်ထားတာဗျာ ကိုရေမွန်ညီမ my day မှာ ခုလိုမျိုးတင်ထားတာတွေ့ရတာပဲ ကျနော်ဒီလိုသူများကိစ္စတွေဆိုဂရုမစိုက်တတ်ဘူးဗျ.. ဒါပေမယ့် ကိုရေမွန့်ကိုနှမြောမိတဲ့စိတ်ဗျာ..ဒါကြီးကတော့ရုပ်ပေါက်လွန်းပါတယ်😅 ဖြစ်စဉ်က-Kက Raymondမဆုံးခင်တုန်းက barမှာသွားစားသောက်ဖို့ hotpotဖိုး 3သိန်းလွှဲထားပေးတာ အဲ့သုံးသိန်းကို အခု​Raymondမိသားစုဆီက ပြန်တောင်းတာတဲ့… ကျနော်တို့လိုတကယ်အချစ်စစ်နဲ့ သိပ်ချစ်ခဲ့ပေးတဲ့လူတွေကျမှ ဘာလို့ဒီလိုမိန်းမမျိုးတွေနဲ့ ဆုံရတာလဲ😅 unicode ရမှေနျမိဘတှကေို HopPot ဖိုး ၃ သိနျးပွနျတောငျးတဲ့ ရမှေနျကောငျမလေး😱😱😱 ထူးဆနျးလိုကျတာဗြာ…. ဒီသတငျးကွားရတော့ ဟုတျမှ ဟုတျပမလားလို့ အပုတျခခြငျြလို့ လြှောကျပွောနကွေတယျထငျထားတာဗြာ ကိုရမှေနျညီမ my day မှာ ခုလိုမြိုးတငျထားတာတှရေ့တာပဲ ကနြျောဒီလိုသူမြားကိစ်စတှဆေိုဂရုမစိုကျတတျဘူးဗြ.. ဒါပမေယျ့ ကိုရမှေနျ့ကိုနှမွောမိတဲ့စိတျဗြာ..ဒါကွီးကတော့ရုပျပေါကျလှနျးပါတယျ😅 ဖွဈစဉျက-Kက Raymondမဆုံးခငျတုနျးက … Read more
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မကွယ်လွန်ခင်က ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုရေမွန် (ရုပ်/သံ)
အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ မကွယ်လွန်ခင်က ဗုဒ္ဓအဆုံးအမကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကိုရေမွန် (ရုပ်/သံ) မသေခင်ကတည်းက ဗုဒ္ဓအကြောင်းပြောလေ့ ကိုတွတ် တစ်ယောက် နောင်ဘဝမှာ ဗုဒ္ဓအကြောင်း လေ့လာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်း ပေးပါတယ် ဘာသာ တရား ကိုလေ့လာ ချင်တဲ့ အကိုတစ်ယောက် နောက်ဘဝ ရောက်လေရာမှာ ဗုဒ္ဓ အဆုံးအမတွေကို သင်ယူရင်း ကောင်းလေရာ ဘဝ လားပါစေလို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဆုတောင်းနေပါတယ် အကို…… ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ မိသားစု တွေလည်း အကိုရဲ့ စိတ်ရင်းအမှန်ကို သိရှိပြီး ဖြေနိုင်မှာပါအကိုရေ… သေချင်းတရားက လူမရွှေပေမယ့် အကို အသေစောနေတာတော့ နှ မြောမိတယ် အကိုရာ…. credit videos unicode အငျတာဗြူးတဈခုမှာ မကှယျလှနျခငျက ဗုဒ်ဓအဆုံးအမကို လလေ့ာခငျြတယျဆိုတဲ့ ကိုရမှေနျ (ရုပျ/သံ) မသခေငျကတညျးက ဗုဒ်ဓအကွောငျးပွောလေ့ … Read more
ရစရာရှိသော အကြွေးများ အမြန်ပြန်ရစေလိုလျှင် ယတြာ
ရစရာရှိနသေော အကွှေးမြား အမွနျပွနျရစလေိုလြှငျ ယတွာ မိမိအကွှေးမြားအမွနျပွနျရစရေနျအတှကျ အစီရငျ ၇ရကျသားသမီး ကွုံတှနေ့ကြေ ကွှေးပေး /ကွှေးယူ ကိစ်စမြားတှငျ တခြို့အဆငျပွရေကျနဲ့ရှောငျဖယျဖယျလုပျနသေူမြား ကွားကနေ အာမခံလုပျ ပေးရငျးနဲ့ကွှေးပူမိနသေူမြား အကွှေးယူပွီး ထှကျပွေးနလေို့ပူပနျသောက ရောကျနရေသူမြားအတှကျ ဆရာ ယတွာတဈခု မြှဝပေါရစေ။ (မိမိအကွှေးရရမညျ့သူ တကယျစားဖို့တောငျ အနိုငျနိုငျဖွဈနပေါက ဤယတွာကိုမပွုလုပျပါနှငျ့) ပနျးကနျပွားတဈခပျြပျေါ ငှကျပြောရှကျတဈရှကျ(ငှကျပြောရှကျကို လေးဒေါငျ့ပုံ ဖွတျယူပါ ပုံအတိုငျး) တငျပွီး ငှကျပြောရှကျပျေါတှငျ တဈထောငျတနျ တဈရှကျတငျပါ။ ငှတေဈထောငျကပျြပျေါတှငျ “မောငျ… / မ… ယူထားသော အကွှေးမြားအမွနျလာဆပျပါ ” ဟုရေးလိုကျပါ။ ငှတေဈထောငျပျေါတှငျ သကွား အနညျးငယျတငျပွီး ဘုရားကြောငျးဆောငျတှငျတငျလှူပါ။ ထိုပနျးကနျပွားကိုကိုငျပွီး ” မိမိအကွှေးမြား အမွနျပွနျရပါလို၏ ” ဟု လေးလေးနကျနကျ ဆုတောငျးပါ။ ဤယတွာကို … Read more
ဇွန်လ ၂၈ရက်နေ့မှ ၃၀ရက်နေ့အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံနိုင်သည့်မြို့များနှင့် နေ့စဉ်မိုးလေ၀သ သတင်း
ဇွန်လ ၂၈ရက်နေ့မှ ၃၀ရက်နေ့အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံနိုင်သည့်မြို့များနှင့် နေ့စဉ်မိုးလေ၀သ သတင်း ဇွန်လ ၂၈ရက်နေ့မှ ၃၀ရက်နေ့အတွင်း မိုးကြီးရေလျှံနိုင်သည့်မြို့များမှာ ဖားကန့် လုံးခင်း ကာမိုင်း မြစ်ကြီးနား ချီဗွေ ဆဒုံး ကန်ပိုက်တီ တို့ဖြစ်ပါသည် အားလုံးဂရုစိုက်ကြပါ…. နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်း (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၇)ရက်နေ့ည(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေ။ ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့တွင် မုတ်သုံလေ အားနည်းနေပါသည်။ မနက်ဖြန်မွန်းတည့်ချိန်အထိခန့်မှန်းချက်။ နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း နှင့် အရှေ့ပိုင်း)၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ ချင်းပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်။ … Read more
ဆရာကွီးမငျးသိင်ျခ၏ (၂၇.၆.၂၀၂၁) မှ (၃.၇.၂၀၂၁) ရကျနအေ့ထိ တဈပတျစာ ဟောစာတမျး
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ၏ (၂၇.၆.၂၁) မှ (၃.၇.၂၁) ရက်နေ့အထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း ၁။တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ အတွက် နိုင်ငံခြား ခရီးအတွက် သတင်း ကောင်းကြားရနိုင်သည်…. ကျောက်မျက်ရတနာ ရောင်းဝယ်ရေး ကံကောင်း လိမ့်မည်…. အနုပညာ လုပ်ငန်းအတွက် သတင်းကောင်းကြားရ နိုင်သည်… အစိုးရဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက ရာထူးတိုး ရွှေ့ပြောင်း ရခြင်း နှင့် အပြင်ဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက လစတိုးနိုင်သည်… အနုပညာ လုပ်ငန်းလုပ်ပါက စိန်ခေါ်မှုကြီး ကြုံရနိုင်သည်…. ပညာရေး ကံကောင်း ပြီး စာမေးပွဲ ဖြေပါက အောင်မြင်နိုင်ည်… ကျန်းမာရေး အနေဖြင့် ခေါင်းမှု ခေါင်းကို ဖြစ်တတ်သည်.. အချစ်ရေးမှာတော့ ကံမကောင်း ဖြစ်နေတတ်ပြီ ချစ်သူနှင့် လမ်းခွဲ ရကိန်း ရှိသည်… အိမ်ထောင် ဖြစ်ပါက … Read more
သရုပ်ဆောင် မင်းမော်ကွန်းကတော့ ထပ်သတိပေးလိုက်ပြန်ပြီ
တော်လှန်ရေးကာလအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ.. ခက်ခဲပင်ပန်းလာတာတွေ.. အားငယ်စိတ်ဓါတ်ကျတာတွေ…. အားလျော့ချင်စိတ်တွေက… အနည်းနဲ့အများဖြစ်လာကြမှာပါ… ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း… အကြိမ်ကြိမ်အားငယ်ဝမ်းနည်းတာတွေ… လူရောစိတ်ရောပင်ပန်းနာကျင်ရတာတွေ… ခဏခဏလဲကျပြီးပြန်မထချင်လောက်အောင်… စိတ်ဓါတ်တွေပြိုကျခဲ့ရတာတွေ… အမှန်တကယ်ရှိခဲ့ကြောင်းကို… ဝန်ခံပါတယ်.. ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့အရှုံးပေးလို့မရပါဘူး…. ကျွန်တော်တို့သည် ဒီတော်လှန်ရေးကို.. ခဏတာခံစားချက်နဲ့လုပ်ခဲ့မိကြတာမဟုတ်ပါ… မတရားဖိနှိပ်တာ အနိုင်ကျင့်တာမကြိုက်လို့… လွပ်လပ်ခြင်း တရားမျှတခြင်းနဲ့… လူ့အခွင့်အရေးတန်းတူညီမျှခြင်းကို… အမှန်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးလို့…. တော်လှန်ခဲ့ကြခြင်းပါ…. လွပ်လပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးရလို့…. တရားမျှတခြင်းမရှိဘူးလို့ခံယူထားလို့… အမှန်တရားနဲ့လွဲချော်နေမှန်းသိလို့…. လက်နက်ကိုင်ထားတိုင်းကြောက်မနေချင်လို့…. လူပေါ်မူတည်ပြီးခွဲခြားအုပ်ချုပ်တာမခံချင်လို့… အသိတရားနဲ့ ခံယူချက်ကြောင့်သာ…. တော်လှန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်…. ခံစားချက်ပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်လာရတဲ့…. တော်လှန်လိုစိတ်ဟာ…. ခံစားချက်အပြောင်းအလဲအလိုက်…. မှေးမှိန်လာတတ်ပေမယ့်…. ခံယူချက်ကြောင့်တော်လှန်ခြင်းကတော့…. ဘယ်အခြေအနေရောက်ရောက်…… မပြောင်းလဲမယိမ်းယိုင်နိုင်ပါဘူး… ဒီအတွက်ဘာတွေကြုံလာကြုံလာ…… နောက်ဆုတ်ဖို့မရှိပါဘူး…… နောင်တမရပါဘူးအရှုံးမပေးပါဘူး…. ကမ္ဘာမကျေပါဘူး….. ကိုယ်ယုံကြည်ရာအမှန်တရားကို…. ရအောင်ယူဖို့ ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့က…. အားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီး….. ဒီတာဝန်အတွက်လူသားတိုင်းမှာ…. မွေးရာပါခွန်အားတွေရှိကြပါတယ်….. ဒီထက်အရေးကြီးတာက….. ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်သစ်တွေကို….. အာဏာတစ်ခုကြောင့်သာ…… မတရားသဖြင့်ချမ်းသာကြပြီး….. ဘာအရည်အချင်း အဆင့်အတန်းမှမရှိ…… လူမဆန်တဲ့သူတွေရဲ့……. … Read more
ရေမွန်အရိုးပြာဖြင့် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခဲ့ပြီးသစ်ပင်စိုက်ကမ်ပိန်းပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နိုဗန်ထူး(ရုပ်သံ)
ရမှေနျအရိုးပွာဖွငျ့ သဈပငျစိုကျပြိုးခဲ့ပွီးသဈပငျစိုကျကမျပိနျးပွုလုပျခဲ့တဲ့ နိုဗနျထူး ရမှေနျကို သတိရခွငျး အထိမျးအမှတျအဖွဈ ကမ်ဘာမွကေို အ ကြိုးပွုစတေဲ့ သဈပငျတှကေို ကိုယျစီ စိုကျပြိုးကွဖို့ New Raymond Tree ဆိုတဲ့ သဈပငျစိုကျ ကမျပိနျးလေးကို ရမှေနျနဲ့ ညီအဈကိုလို့ ခငျမငျရငျးနှီးခဲ့တဲ့ အဆိုတျော နိုဗနျထူးက စတငျခဲ့ပါတယျ။ ဒီကမျပိနျးလေး စတငျမှုအဖွဈ သဈပငျအခြို့ကို နိုဗနျးထူးကစိုကျပြိုးခဲ့ပွီး ဒီသဈပငျလေးတှမှောတော့ ရမှေနျရဲ့ အရိုးပွာအခြို့ကို ထညျ့သှငျး စိုကျပြိုးခဲ့ပါတယျ ရမှေနျ(ခ)တှတျပီကို သတိရသော အားဖွငျ့ ပရိသတျကွီးလဲ သဈပငျစိုကျ ကမျပိနျးလေးမှာ ပါဝငျရငျး ကိုယျတိုငျစိုကျတဲ့ သဈပငျလေးနဲ့ ဓာတျပုံရိုကျပွီး #RaymondTree လေးနဲ့အတူ ကမ်ဘာမွကေို အလှဆငျလို့ရပါတယျနျော။ ယခုလို ပွီးဆုံးအောငျ ဖတျပေးကွတဲ့ စာဖတျသူ ပရိသတျအ ပေါငျး ကိုယျစိတျနှဈဖွာ ကနျြမာခမျြးသာကွပါစခေငျဗြာ။ … Read more
အဖအမည်က ဦးစောခူဆဲ သား ရေမွန်(ခ)တွတ်ပီ ငယ်ဘဝ ဇာတ်ကြောင်း(ရုပ်သံ)
အဖအမည်က ဦးစောခူဆဲ သား ရေမွန်(ခ)တွတ်ပီ ငယ်ဘဝပုံရိပ်များ…… တေးရေးစောခူဆဲရဲ့သားမှန်းအခုမှသိတယ် ဖေဖေဦးစောခူဆဲ မေမေဒေါ်ခင်မြတ်မွန်တို့ရဲ့သားလေး တွတ်ပီ အမေများနေ့တစ်နှစ်မှာ ဆုတောင်းစကားဆိုခဲ့တယ် နောင်ဘဝဆိုတာရှိခဲ့ရင်အမေအိမ်ထောင်ရေးကံကောင်းပါစေတဲ့ ခပ်ငယ်ငယ်ကလေးထဲက ကြော်ငြာနောက်ခံ ကလေးသီချင်းဆိုရင် တွတ်ပီပဲတဲ့ အမေနဲ့ အတူတူဆိုတာ အရွယ်ရောက်လာတော့9တန်း10တန်းကတည်းကသီချင်းတွေရေး အမေနဲ့တိုင်ပင် အလုပ်တွေကြိုးစားအခွေထုတ်လာခဲ့တာ အဖေနောက်အိမ်ထောင်နဲ့ ပျော်နေတာကိုလည်း ပြုံးပြီး သဘောကျနေတဲ့သား အဖေလည်း သူ့ဘဝနဲ့သူ သားလည်းအမေနဲ့ပျော်နေပါတယ်တဲ့ စာနယ်ဇင်းတွေမှာဖြေထားတာ အမေ့အတွက် အားဖြစ်စေခဲ့သောသား ကောင်းရာ ဘုံဘဝ ရောက်ပါစေ အခုလို fb ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခင် အရင်ခေတ်ကတည်းက CD ထွက်ရင်နားထောင် တွတ်ပီအကြောင်းပါတဲ့ Magazine တွေကိုမှ ဖတ်ခဲ့ သူကြီးပါ ခုတော့ အားလုံးကိုချန်ခဲ့ Crd -မူရင်းရေးသားသူ unicode အဖအမညျက ဦးစောခူဆဲ … Read more
Attention ရှာတယ် Followers ရှာတယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေကို ရင်နာနာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ရေမွန်ကောင်မလေး
Attention ရှာတယ် Followers ရှာတယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေကို ရင်နာနာနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ ရေမွန်ကောင်မလေး ဪ… လူတွေက ကိုယ်တိုင်မကြုံရသ၍ မနာတတ်ဘူးဆိုတာ အမှန်ပဲ… ကေက ပုံမှန်ဆို စွာစိလန်ဆိုတော့ အမြဲရန်ပြန်တွေ့ရင် ကိုကိုက babe ignorance is the bliss ပဲ မတူတာတွေနဲ့ ပြိုင်ပြောမနေနဲ့ဆိုပြီး အမြဲ calm ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တာ အခုလည်း အဲ့လိုပဲထားလိုက်ပါမယ် သူအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတာသိလို့ ကေလိုက်မသွားဘူးဆိုတာ ပထမက သူ့ dead body ကိုပြန်သယ်လာမယ်ဆိုလို့ပါ နောက်ရက်မှ အဲ့မှာပဲ ချမယ်ဆိုပြီး အစီအစဉ်တွေပြောင်းသွားတာ လိုကိချင်တာပေါ့ ကိုယ့်ရည်းစား နောက်ဆုံးခရီးပဲ ဘယ်လိုမှ သတ္တိရော အားရော လိုက်သွားဖို့ မရှိခဲ့ဘူး သူကတော့ ကေဘယ်လောက်ဆိုးဆိုး အနိုင်ကျင့်ကျင့် အပစ်မမြင်တတ်တဲ့သူ ဆိုတော့ အခုလည်း … Read more
ရေမွန်၏နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်မပို့နိုင်လို့ အပြစ်ပြောနေကြသူတွေကို ဖြေရှင်းလာတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ မိခင်
ရေမွန်၏နောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်မပို့နိုင်လို့ အပြစ်ပြောနေကြသူတွေကို ဖြေရှင်းလာတဲ့ကောင်မလေးရဲ့ မိခင် အဆိုတော်ရေမွန်၏နောက်ဆုံးခရီးကို ချစ်သူမှ လိုက်ပါ ပို့ဆောင်ခြင်းမရှိတာကြောင့် ဝေဖန်ခံနေရ ကျမ သမီးလေးကို အပြစ်ပြောနေသူများရှင်.. သမီးကို က်မက မလွှတ္တာပါ သူအရမ်းသွားချင်ခဲ့ပါတယ် သူအခု အရမ်းပင်ပန်းပြီး ဖျားနေပါတယ် အဖျား ၁၀၂ F က ကျလိုက် တက်လိုက်နဲ့ အရမ်းလဲ အားနည်းနေပါတယ် အချိန်တိုင်းလည်း ငိုနေရလို့ ပင်ပန်းလှပါပြီ ကျမက သူ့ကို memory ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပဲ ရှိနေစေချင်တာလည်း ပါပါတယ်.. ဟိုကိုလိုက်သွားဖို့ရာ လမ်းခရီး နေရာတို့ကိုလည်း ကျမ စိတ်မချတာပါ ကျမလည်း လိုက်မပို့နိုင်.. သူ့ကိုလည်း လွှတ်လိုက်ရမှာ စိတ်မချနဲ့မို့ ကျမလဲ တော်တော်လေး စိတ်ပင်ပန်းရပါတယ် ပြောချင်တာလေးကလေ.. ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းက နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရတာ ရှိသလို … Read more